Inani labantu be Martech Zone | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngo-Epreli 10, 2010 NgoMgqibelo, ngoJuni 27, 2015 Douglas Karr
Usenokuba uqaphele ukuba besisebenza Inzululwazi uphando kwibhlog okwethutyana ngoku. Ndiyathemba ukuba uthathe ixesha lokuphendula uphando-iziphumo ziyamangalisa. Nazi ezinye izinto eziphambili:
I-62.5% yabafundi abaphumeleleyo kwiikholeji, 21.9% banazo zidanga
I-51.6% yabafundi uqeshwe ngokusisigxina, 32.3% zi uziqeshile.
Uninzi lwabafundi abenzi zigqibo okanye ube nefuthe:
Abafundi bavela iinkampani zabo bonke ubungakanani:
Uninzi lwabafundi Abaphathi abaphezulu okanye iinkokheli yeenkampani zabo.
Uninzi lwabafundi bakwiifayile ze- 34 ukuya ku-44 yeminyaka yobudala.
Ama-56.3% abafundi bane umbono ongalunganga kwezoqoqosho.
Uninzi lwabafundi lwenza ngaphezulu kwe- $ 75k, nangaphezulu ngaphezulu kwe- $ 150k.
Uninzi lwabafundi lusebenzisa i-Intanethi ngaphezulu kweeyure ezingama-24 ngeveki, ngesinye kwisithathu ngaphezulu kweeyure ezingama-36 ngeveki.
Mhlawumbi eyona nto inomdla yayiziimo ezithile zeshishini- ngaphezulu kwesiqingatha sabafundi bathi banomdla Ukuqala ishishini labo kunye / okanye ukutshintsha imisebenzi kunye nemisebenzi. Njengosomashishini osisigxina (aka-mfo othanda ukungxama ukusuka komnye umceli mngeni ukuya kolandelayo), oku kwakumnandi kum. Ngexesha elingaphezulu, iya kuphakamisa ukuba nditsalela abafundi abanengqondo efanayo kwibhlog.
Ezi zibalo zabantu kanye apho ndingathanda ukuba ibhlog ibekhona njengemeko yempembelelo kunye nokusebenziseka!
Lula ishishini lakho ngeeapp zikaGoogle
Epreli 10, 2010 ngo-11: 36 AM
Umdla kunye nombulelo ngokwabelana ngolwazi kunye nesixhobo! Idatha yomfo wedatha!
Uvuyo kunye nokuBulisa,